Ntụgharị Asụsụ Arabic, Ịsụgharị, Ọrụ Nsụgharị - Ibe Mbụ
Ntụgharị Asụsụ Arabic, Ịsụgharị, Ọrụ Nsụgharị
Ịghọta Asụsụ Arabic & na -enye ndị ntụgharị asụsụ Arabic ọkachamara, ndị ntụgharị okwu na ndị na -edegharị akwụkwọ
Ọrụ Asụsụ Amerịka (AML-Global) ghọtara mkpa ọ dị ịrụ ọrụ n'asụsụ Arabic. Ruo otu ụzọ n'ụzọ anọ nke otu narị afọ, Ọrụ Asụsụ Amerịka ejirila asụsụ Arabic na ọtụtụ narị ndị ọzọ si gburugburu ụwa rụọ ọrụ. Anyị na -enye ọrụ asụsụ zuru oke awa 24, ụbọchị asaa n'izu n'ụwa niile site na ịnye ọrụ ntụgharị asụsụ Arabic, ntụgharị na ntụgharị yana narị narị asụsụ na olumba ndị ọzọ. Ndị na -asụ asụsụ anyị bụ ndị na -asụ asụsụ obodo na ndị edemede na -enyocha, nzere, gbaara asambodo, nwalere ubi ma nwee ahụmịhe n'ọtụtụ ntọala ụlọ ọrụ akọwapụtara. Asụsụ Arabic bụ ihe pụrụ iche ma nwee ezigbo mmalite na njirimara.
Akụkọ bara ọgaranya na ọdịbendị nke Middle East na Asụsụ Arabik ya
Mba Arab na -ekpuchi oke ala gbatịrị site na Oke Osimiri Atlantic ruo Oké Osimiri Arab, nke nwere ihe karịrị mba 25 na ihe karịrị nde mmadụ 300. Ihe ka n'ọnụ ọgụgụ na -agbaso n'okpukpe Alakụba siri ike, n'agbanyeghị na ọnụọgụ Ndị Kraịst na -eto n'ime Arab Arab. Ebe ọ bụ na asụsụ Arabik gafere n'ọtụtụ mba dị iche iche nke nwere ọtụtụ omenala, ọ bụ usoro nkwukọrịta dị mkpa ịghọta. Ịga njem na Middle East nwere ike bụrụ ihe ịma aka nye ọtụtụ mmadụ mana n'ihi na ọtụtụ akụkọ ntolite mmadụ sitere na mpaghara ala a, ọ nwere ọtụtụ ihe ọmụma na ihe nketa ọdịbendị. Ọ bụrụ na ị kpebie ịga leta Pyramid Ukwu nke Egypt, were mma nke oke osimiri Moroccan ma ọ bụ obodo ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke Tunisia, Ọrụ Asụsụ Amerịka dị ebe ahụ iji nye gị ndị ntụgharị okwu agbaara agbazi maka njem gị.
Mmalite nke Asụsụ Arabik
Arabic bụ asụsụ etiti Semitic metụtara yana ekewa n'etiti asụsụ Semitic ndị ọzọ dị ka Hibru na Aramaic. Ọ bụ onye kacha ibu na ezinụlọ asụsụ Semitic, nke ihe dị ka nde mmadụ 300 na -asụ dị ka asụsụ nke abụọ yana nde 250 dị ka nke mbụ. Ọnụ ọgụgụ kasịnụ nke ndị na -asụ Arabic bi na Middle East na North Africa. Arabic bụ asụsụ mgbe ochie, nke sitere na Classical Arabian na ederede Arabic tupu Alakụba malitere na narị afọ nke anọ. Arabic agbaziri site n'ọtụtụ asụsụ, gụnyere Hibru, Persian na Aramaic ma metụtakwa asụsụ ndị Europe dịka Spanish, Portuguese na Sicilian.
Usoro ide ihe nke asụsụ Arabic
Site na edemede Aramaic, mkpụrụedemede Arabic nwere ọtụtụ myirịta na nke Copt, Cyrillic na Greek. A na -ede Arabic, dị ka ọtụtụ asụsụ Semitic ndị ọzọ site n'aka nri gaa n'aka ekpe ma na -eji ọtụtụ ụdị edemede, Naskh eji ebipụta yana Ruq'ah nke a na -ejikarị ede aka. A ka na -eji ịkpọ oku eme ihe taa, a na -ahụkwa ya dị ka nka; a na -akwanyere ndị na -akpọ oku ọkụ. Ọdịdị nkọ nke Arabic na -eme onwe ya ka ọ bụrụ ihe dị egwu na ọmarịcha ọrịa strok; ndị na -akpọ oku na -ese nwere nka nke ukwuu nke na ha nwere ike ịkpụ ihe odide ahụ ka ọ bụrụ ụdị anụmanụ ma ọ bụ akara.
Kedu onye ị ga -atụkwasị obi na mkpa asụsụ Arabic gị dị mkpa?
Asụsụ Arabic bụ asụsụ dị mkpa n'ụwa niile. Ọ dị mkpa ịghọta ọdịdị izugbe na atụmatụ nke Arabic. Kemgbe 1985, AML-Global enyela ndị ntụgharị asụsụ Arabik pụrụ iche, ndị ntụgharị okwu na ndị na-edenye aha n'ụwa niile.
Covid19 bu ụzọ kpụrụ steeti United States na Machị 2020 ma ọ gara n'ihu na -agbanwe gburugburu ọrụ anyị na igbochi mmekọrịta ihu na ihu. Anyị ghọtara na nke a nwere ike ịbụ ụkpụrụ ọhụrụ nwa oge wee nwee obi ụtọ ịnye gị nnukwu ihe ọzọ ị na -atụgharị asụsụ ihu na ihu.
Nhọrọ Ịsụgharị Ịrụ Ọrụ Dị Mma, Nchekwa & Ọnụ Ego-Irè
Ịsụgharị ekwentị na ekwentị (OPI)
A na -enye ntụgharị asụsụ ekwentị (OPI) n'asụsụ 100+. Ọrụ anyị dị awa 24/ụbọchị 7 ma dị mma maka ọrụ oge dị mkpụmkpụ yana ndị na -apụtaghị oge azụmaahịa gị. Nke a bụkwa ihe ịtụnanya maka ịhazi oge nkeji ikpeazụ yana ọ bụ nhọrọ dị mfe iji ma dị ọnụ ọnụ. A na-enyekwa nhọrọ a ma ahaziri tupu & ihe achọrọ na. Pịa ebe a maka ozi ndị ọzọ.
Nkọwapụta nke vidio vidiyo (VRI)
A na -akpọ sistemụ VRI anyị Mebere njikọ enwere ike iji ya ma-ahaziri tupu & na-achọ. Ndị ọkà mmụta asụsụ anyị dị 24 Awa/7 ụbọchị, sistemụ anyị dịkwa mfe ịtọlite, na -akwụkwa ụgwọ nke ọma ma na -arụ ọrụ nke ọma. Pịa ebe a maka ozi ndị ọzọ.